Pedro Rodas kwuru | | Apple, Apple TV, iOS, iPad, OS X Yosemite, ọtụtụ
Otu ụbọchị ụka anyị ga - anọnyere gị na nchịkọta kpochapụwo nke kacha mma n'izu na Soy de Mac. Izu nke onye ọ bụla na-apụghị ịhụ n'ihi ihe ọjọọ niile na-eme n'ụwa metụtara iyi ọha egwu. Agbanyeghị, ị ga-emerịrị ihe ahụ niile ma gaa n'ihu.
Ya mere ugbu a na ị maara, ma ọ bụrụ na n'izu a ị na-enwebeghị ike ịbụ nnọọ enyịn na anyị blog na ị na-adịghị ruo ụbọchị na ozi ọma metụtara Apple gaa n'ihu na-agụ isiokwu a n'ihi na n'ime ya ka anyị na-anakọta ihe kachasị mkpa.
Anyị na-amalite nchịkọta anyị taa site na mpempe ozi nke onye ọrụ ibe anyị bụ Ignacio Sala nyere maka njikọta nke iOS na OS X n'ọdịnihu. Dị ka anyị niile mara Apple ewepụtala iPad Pro ọhụrụ na ọ bụ ya mere enwere ike ịkọwa njikọ dị n'etiti usoro abụọ a, nke Tim Cook gọnarịrị kpam kpam.
Akụkọ ọzọ dị ịrịba ama, nke m dere n'onwe m, bụ nke m nyere ya Ohere maka USB-C na USB-A Cables inwe ike jikọọ Apple TV ọhụrụ na Mac iji nwee ike idekọ ihuenyo ya. Enwere ike iji njikọ ọhụrụ a weghachite ngwaọrụ ma ọ bụ rụọ ọrụ ndị ọzọ dịka nke onye ọrụ ibe anyị bụ Ignacio Sala gwara anyị n'oge ahụ, ndekọ ndekọ ọdịyo na vidiyo sitere na Apple TV na Mac.
Oge ọ bụla Apple wepụtara ngwaọrụ ọhụrụ na ahịa, aha mbu nke ndi oru nta akuko nile na acho bu uche nke Steve Wozniak, onye nchoputa nke Apple na Steve Jobs. Wozniak ka raara onwe ya nye izi ihe na gburugburu ụwa ma echiche ya bụ otu n'ime ndị a kacha akwanyere ùgwù mgbe ọ mepere ọnụ ya ikwu maka ihe niile Apple. Na ogbako ikpeazụ nke ụlọ ọrụ New Relic haziri, Wozniac kwuru okwu ọzọ banyere usoro okike Apple na mgbakwunye na ịkwado ikwu okwu na nkwupụta nke Tim Cook nke ọ na-ekwenye na iPad Pro ọhụrụ ga-anọchi laptọọpụ na desktọọpụ n'oge na-adịghị anya. Mana o jikwa ohere ahụ kwuo maka Apple Watch, nke o gosipụtagoro obi abụọ banyere ya.
La 'Magnetik n'ọdụ ụgbọ mmiri isi' maka Apple nche Ọ dị ugbu a ịzụta site na Apple Stores gburugburu ụwa. Ihe oyiyi a sitere na ụlọ ahịa Berlin na Germany. Ngwaahịa a dị ugbu a ịzụta n'ịntanetị na n'elu shelf ụfọdụ Storelọ Ahịa Apple enwere ike ịpụtalarị ikpughere, ikekwe ntakịrị oge karịa atụmatụ ezubere.
Anyị na-aga n'ihu mkpokọta na ozi ọma na-ekwu banyere otú e si elekọta ndị Siri Remote nke ọdịda nwere ike ịta ahụhụ. Anyị na-ewetara gị ikpe ikpe silicone nke a zụtara na Alienares maka ihe dị ka euro 9 na uche ahụ Chebe Apple TV dịpụrụ adịpụ.
Anyị gwụchara mkpokọta ahụ site na ịza ajụjụ na dịka ụfọdụ asịrị, Apple chọrọ ka ụdị nke abụọ nke Apple Watch dị maka oge ọkọchị nke 2016 (opekata mpe maka mba ndị mbụ ebupụtara ụzọ) na nke a ga-apụta imepụta elekere dị egwu. Maka nke a, ha ga-achọ ndị nrụpụta ọhụrụ na mgbakwunye na ndị ị nwere ugbu a iji kpọkọta ngwaọrụ gị ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple TV » Mmekọrịta enwere ike ime nke iOS na OSX, eriri USB-C, Apple gburugburu, Apple Watch n'ọdụ ụgbọ mmiri, Siri Remote case na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Esi ewe JPG screenshots natively na OS X